Noho ny fitsaram-bahoaka… : nodoran’ny olona ny lapan’ny Fitsarana | NewsMada
Noho ny fitsaram-bahoaka… : nodoran’ny olona ny lapan’ny Fitsarana
Nirehitra i Maroantsetra, omaly ! Nodoran’ny olona ny lapan’ny Fitsarana. May potika hatramin’ny fiarakodian’ny lehiben’ny mpampanoa lalàna. Tsy vitan’izay, nirohotra teny amin’ny fonja ireo mpanao fihetsiketsehana, nitaky ny hamoahana ireo olona voarohirohy ho nanao fitsaram-bahoaka tamina famonoana dahalo iray.
Kila forehitra ny fitsarana any Maroantsetra, omaly; maro ny antontan-taratasin’ady may tamin’ny birao maromaro ao an-toerana. Potika ihany koa ny fiaran’ny lehiben’ny mpampanoa lalàna vokatry ny fahatezeram-bahoaka. Naratra ihany koa ny zanak’ity farany, ary nisy mpirakidraharaha iray voatoraka. Naiditra hopitaly itsy farany ary zandary iray ihany koa vaky loha. Tsy nijanona teo ny raharaha fa mbola nitaky ny hamoahana tsy misy hataa andro ny olona maromaro notanana am-ponja noho ny resaka fitsaram-bahoaka ireo vahoaka marobe. Nanakatona ny varavarany ny magazay mpivarotra sy botika
Nirefodrefotra ny basy nataon’ny mpitandro filaminana nanoloana izany nentina nandravana ireo vahoaka marobe. Nanao tifi-danitra ny polisy sy ny zandary tamin’izany, ary nanenjika ireo mpanao fihetsiketsehana.
Fitsarana ireo olona voalaza fa tompon’omby, voarohirohy tamin’ny famonoana lehilahy iray antsoina hoe Rasiramamy, voatondro ho dahalo, omaly tany Maroantsetra. Tonga marobe tao an-toerana ny olona any an-toerana nanatrika ity raharaham-pitsarana ity, ary teo ny olona no nanomboka nitabataba nitaky ny hamotsorana ireo voarohirohy.
Raha tsiahivina ny tantara, ny alin’ny 31 novambra 2014 no tratran’ny fokonolona Rasiramamy sy Rapapany, jiolahy nikoizana tamin’ny halatr’ omby sy mpamerin-keloka kanefa tsy voatazona ela ao amin’ny fonjaben’ i Maroantsetra. Nanaovan’ny fokonolona fitsaram-bahoaka io lehilahy io ary maty. Tsy nanenjika na nanokatra famotorana tamin’ ity raharaha ity ny fitsarana tamin’ izany fotoana izany. Fa anisan’ny fanambin’ny tonia mpampanoa lalàna ao amin’ny sampam-pitsarana ambaratonga voalohany, Velondrazana Nicolas Stephan, nandritra ny fametrahana azy tamin’ny fomba ofisialy ny voalohan’ny volana jona 2015 teo. Nilaza izy fa tsy ekena intsony ny fitsaram-bahoaka ary mila haverina ny fahatokisan’ny vahoka ny fitsarana. Izay indrindra no nahatonga an’ ity raharaha ity nofohazina ka izao lasa mitarika olana hafa izao indray.